अलिबाबाका अध्यक्ष ज्याक माले लिए अवकाश, अब शिक्षक बन्ने - Everest Dainik - News from Nepal
अलिबाबाका अध्यक्ष ज्याक माले लिए अवकाश, अब शिक्षक बन्ने
काठमाडौंः प्रसिद्ध चिनियाँ अनलाइन सपिङ कम्पनी अलिबाबाका अध्यक्ष ज्याक माले सेवा निवृत्त भएका छन्। अलिबाबा समूहका अध्यक्ष रहेका माले आफ्नो ५५ औं जन्मदिनमा सक्रिय व्यवसायिक जीवन छाड्ने घोषणा गरेका हुन्।
कमोपनीको म,उख्यालय रहेको चीनको हाङजोऊ शहरमा रहेको ओलम्पिक स्पोर्ट्स स्टेडियममा ८० हजार मानिसबीच उनले यो घोषणा गरेका हुन्। विश्वका धेरै देशमा अनलाइन बिजनेसमा सक्रिय कम्पनीको अबको नेतृत्व डेनियल झाङले सम्हाल्ने बताइएको छ।
व्यवसायिक जीवनबाट अवकाश लिएपछि माले आफ्नो जीवन परोपकारी कामहरूमा बिताउने बताएका छन्। उनले अबका दिनमा शिक्षण गर्ने र आफ्नो सम्पत्तिबाट ४१ अर्ब डलर भिभिन्न शिक्षण संस्थानहरूमा दान गर्ने बताएका छन्।
बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउन्डेसनबाट प्रभावित भएको भन्दै माले २०१४ मा ज्याक मा फाउन्डेसन स्थापना गरेका थिए। यस संस्थाले परोपकार, वातावरण, महिला सशक्तिकरण शिक्षा र विकास जस्ता क्षेत्रमा सहयोग पुर्याइरहेको छ।
४ खर्ब ६० अर्ब डलरको कम्पनी
अलीबाबा समूहको वर्तमान मूल्यांकन ४६० अर्ब रहेको छ। उनले आफू बिल गेट्सबत्य प्रभावित रहेको र उनीले जस्तै अवकाशपछि परोपकारी गतिविधिमा समय दिन चाहेको बताउँदै आएका थिए। सामान्यतया कुनै पनि ठुला कम्पनीहरूमा कम्पनीको नेतृत्व बद्लिएको खण्डमा यसको असर शेयर बजारमा पनि पर्ने गर्छ तर अलिबाबाको मामिलामा भने यस्तो भएन।
माले यस कम्पानीलाई दिलाएको पहिचानले गर्दा यस्तो भएको व्यवसाय विश्ल्व्षकहरू बताउँछन् . मालाई चीनको अर्थव्यवस्था, अनलाइन कारोबार र इन्टरनेटको व्विकास्मा गरेको योगदानका लागि चिन्ने गरिन्छ।
६६ हजार स्थायी कर्मचारी
माले १९९९ मा चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूलाई विदेशी थोक व्यापारीहरूसँग जोड्न अलिबाबा कम्पनीको स्थापना गरेका थिए। स्थापना कालमा उनले १८ जना कर्मचारी र ६० हजार डलर पूँजीबाट कम्पनी स्थापना गरेका थिए। एउटा अपार्टमेन्टबाट सुरु भएको कम्पनीको यात्रा अहिले ६६ हजार स्थायी कर्मचारीहरूका साथ् जारी छ।
यस कम्पनीलाई चीनमा ठुलो संख्यामा उपभोक्ताहरूसँग जोडिएको छ र यसको अनलाइन बिक्री प्रणालीबाट हैक दिन औसत साढे सात करोड मानिस खरिददारी गर्ने गर्दछन्।
उनले कम्पनीको 6. २ प्रतिशत शेयर आफूले राखेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य रहेका मा चीनका सबैभन्दा धनी मानिस हुन्।
शिक्षक बन्ने धोको
ज्याक मा कम्तिमा पनि ७० वर्षसम्म सक्रिय रूपमा काम गर्न चाहन्छन् र उनले आफ्नो रुचि शिक्षणतिर रहेको बताएका छन्। ‘अलिबबा: द हाउस द्याट ज्याक मा बिल्ट’ भन्ने पुस्तकका लेखक डंकन क्लार्क भन्छन् ‘व्यापार सुरु गर्नु अघि अंग्रेजी शिक्षक रहेका माले आफ्नो अवकाशका लागि पनि सेप्टेम्बर १० तारेखको दिन चुनेका छन्। यस दिन चीनमा शिक्षक दिवस मनाइन्छ। यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ।’
गत वर्ष विश्व आर्थिक मंचको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माले शिक्षणविधिमाथि टिप्पणी गर्दै ‘हामीले हाम्रो शिक्षण विधिमा परिवर्तन नल्याउने हो भने ३० वर्षपछि त्यो ठुलो समस्याको रूपमा देखा पर्ने ‘ चेतावनी दिएका थिए।
हाल प्रचलनमा रहेको ज्ञानमा आधारित शिक्षण पद्धतिले बच्चाहरूमा असफलताको त्रास रहेको भन्दै अहिलेको शिक्षाले दिने प्रतिस्पर्धाको भावनाले बच्चाहरूलाई आरिसे बनाउने र उनीहरू यन्त्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताएकिआ थिए। ज्याकले यसको साटो पाठ्यक्रममा स्वतन्त्र विचार, मूल्य र समूह कार्य जस्ता ‘सफ्ट स्किल’ सामेल गरिनुपर्ने बताएका थिए।
सन् २०१७ मा माको संस्थाले चीनका ग्रामीण भेगमा प्रभावकारी शिक्षण गर्ने प्रतिभाहरूको खोजि गर्न १० वर्षका लागि ४५ मिलियन डलर छुट्याएको थियो। क्लार्कले माले आफ्नो शिक्षणप्रतिको लगावलाई चीनबाहिर समेत प्रयोग गर्न सक्ने बताए।
उनले भने, ‘यी अर्बपति अफ्रिका लगायतका ठाउँहरूमा व्यापारप्रति आफ़्नोइ धारणा साझा गर्दै आएका छन्। उनले एक करोड डलरको उद्यमी पुरस्कार समेत स्थापना गरेका छन्। यसका अतिरिक्त उनले वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत लगानी गरेका छन्।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र पिपल्स डेलीले गतवर्ष मालाई चीनको उन्नयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने एक सय व्यक्तिको सूचीमा राखेको थियो।
थुप्रै देशमा लगानी
अलिबबाले चीनका अतिरिक्त एसिया र अफ्रिकाका अन्य थुप्रै देशहरूमा समेत लगानी गरेको छ। नेपालमा संचालित अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म दराजमा पनि अलिबाबाको स्वामित्व रहेको छ।
अहिलेका धेरै मोबाइल फोनमा सुरुमै राखिएको हुने युसी ब्राउजर र युसी न्युजमा पनि अलिबाबाको लगानी रहेको छ। उनको कम्पनीले भारतमा पेटिएम , बिगबास्केट र जोमाटो जस्ता कम्पनीमा लगानी गरेको छ।
ट्याग्स: अलिबाबा समूह, ज्याक माले